EZRA 6.1-22 F. 6,4 | Fitandremana Ankadifotsy
EZRA 6.1-22 F. 6,4
Vita ny tempoly (1-15) Hita ny horonan-taratasy mirakitra ny didy navoakan’i Kyrosy mpanjaka milaza ny tokony hanorenana ny tempoly sy ny hanomezana ny vola ilaina ary ny fitaovana ho ampiasaina amin’izany ; eny hatramin’ny zavatra ilaina hatao fanatitra ho an’Andriamanitra aza dia omena ny zanak’Israely isanandro, mba anaovana fivavahana ny amin’ny fiainan’ny mpanjaka sy ireo zanany (1-12). Nomena malalaka hanao ny asa izy ireo ary dia vita tao anatin’ny enim-bolana ny tranon’Andriamanitra (14-15). Mahagaga Andriamanitra ! Mahatanteraka ny teniny Izy ary amin’ny fomba izay tsy takatry ny sain’olombelona. Eo ambany fahefany ny voaary rehetra, satria “An'i Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy.” (Salamo 24.1)
Tokanana ny tempoly (16-22)
Nody fahasambarana ny fahoriana teo amin’ireto zanak’Israely izay nody avy tany amin’ny fahababoana. Niroso tamin’ny fitokanana ny tempoly tamin’ny fifaliana ny vahoakan’Andriamanitra (16). Nahatalanjona ny fahafoizan’ny olona entina anaovana izany, izay nampiarahina fanatitra noho ny ota ho fanamasinany ny tenany (17). Sarobidy loatra ho azy ireo mantsy ny nahatsapany fa nanana toerana tao Jerosalema indray Andriamanitra. Notandremana ho araka ny lalàn’i Mosesy ny fanompoam-pivavahana (18). Niara-nanatona an’Andriamanitra tamin’izy ireo ihany koa ireo izay nanalavitra ny fahalotoan’ny firenena manodidina (21). Ny fitondran-tenako ve mba mahataona ny manodidina ahy hanatona an’Andriamanitra ?
Fahamarinana : “Fa Jehovah efa nampifaly azy…” (22). Iza sy inona no loharanom-pifaliako ? Andriamanitra noho ny fahatsapako fa Izy no nanome hery sy fahalalana nahavitako ny asany sa ny tenako ihany noho ny fiheverako fa ny heriko sy ny fahaizako manokana no nahavitako izany ?